Nabadoon Gaboobe Aadan Dalab oo caawa lagu dilay magaalada Gaalkacyo
December 28, 2012 - Written by
Gaalkacyo:-Waxaa caawa lagu dilay allaha u naxariistee magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug Nabadoon Gaboobe Aadan Dalab oo ka mid ahaa Nabadoonada gobolka Mudug , Nabadoonka Gaboobe ayaa la sheegayaa in ay dileen niman dhalinyaro ah oo ku hubeysan bistoolado xili uu soo tukaday salaadii cishe kuna sii jeeday gurigiisa. Nabadoon Gaboobe Aadan ayaa markii la dilayey waxaa uu marayey Xaafada Israac ee Waqooyiga Gaalkacyo sidda ay saxaafada u xaqiijiyeen Ehelada Nabadoonka.
Ehelada Marxuunka Gaboobe Aadan ayaa waxaa sidoo kale oo ay saxaafada u sheegeen in Nabadoon Gaboobe uu markii hore uu dhaawac ka soo gaaray weerarka lagu qaaday ka dibna loola cararay Isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo halkaas oo uu markii danbe uu ku geeriyooday Nabadoonku.
Magaalada Gaalakacyo ee xarunta Gobolka Mudug ayaa waxaa ay bilihii la soo dhaafay aysan ka dhicin duufano dilal qorshayn oo ay fuliyaan kooxo cadaw ku ah bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo iyagoo inta badan bartilmaamsada, Culimada , ducaad Nabadoonada , Saraakiishii hore ee ka tirsanaan jiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, ganacsato iyo waxgarad kale.
Dilalka qorsahayn ee lagu laaayo waxgaradka iyo dadka bulshada magac ku dhex leh ayaa waxaa ay ka dhacaan inta u dhexeysa magaalooyinka Gaalkacyo iyo Laascaanood iyadoo ilaa hadda aan jirin koox sheegtay dilalkaas .